Lafti Oromoo km 1, 100, 000 diinaf keenamun hafee km Tokko ilee harka diinatti kufuu hin qabduu. Finfinneen ilee Oromiyaa jalati buluu qabdi. Finfinne keessatti Ijooleen Oromoo Afaan isaan barachuu qabuu turan, Bulchiinsa magaala Finfinnee 10ni keessati Maneen barumsa Afaan Oromoo itti barsiisan akka Magaalan Finfinnee ijarsisuu kanan dura irratti waliif galamee Obbo Dagafee Bulaa Ittianaana Piresdaantii Nannoo Oromoo Dhagaa bu’uura erga busan waggan 10 darbe jira. Ergasi booda Oogantoon OPDO kun maliif hojii irra hin oluu jeedhan gaafatan hin beekan, Oromoon yoo mirga kana gaafatee ilaalcha dhiphuma jeedhamee qooratama. Magaalan Finfinne of isheetiyuu Bulchiinsa garii kan hin qabnee, Biishan dhugaatii kan hin qabnee, Ibsa kan hin qabnee Magaaloon Nannoo Oromiyya Magaalaa Finfinnee irra waan argatuu hin qabuu, Hanga yoona Finfinnee Fayada ture malee Finfinne irra fayadamee hin beekuu. Heerii feederallaa Oromiyaan Finfinnee irra fayidaa addaa argachuu qabdi jeedha. Garu Finfinneen Oromiyaaf kan keenitee yoo jiratee xurii fi sumii finfinnee irra gara Oromiyaati dhangala’uu qoofa. Tessoon Finfinnee isaa Gaafa Dargin murteeseti deebi’uu qaba kun Amoo Kara Geengoo(ring) Finfinnee irra darbu hin qabu.
Finfinnen erga hundeefamte bara1886 kaafte hanga haraati 527 km2 Kun Magaaloota Adunya gurguda jeedhaman hunda keesa gudadha. Sababin isaa Pilaani malee caalisee lafa irra dalga gudacha ture, Magaalan Adunya dalga balachuu dhisee samiiti ol gudata ture. fakeenyaf:
Magaala Washingiton DC bara 1790 hundefatamte balina 177 km2 qabdi Magaalan kun gara nannoo birrati huminan babalachuu hin dandeesuu. Finfinnen garuu seera fi heera biyyatti cabsuun gara barbadeeti babalaata jirti. Magaala Guditi biyya Belgium Brussels yoo ilalaalee bara 1847 erga hundeftamte katee hanga yoonati 32.61 km2 qoofa qabdi, kana jeechun magaaloon nannoo ishee jiran hundi of isaanin of danda’aan Mootummaa Nannoo Flemish jalati buluu,. Kana qoofa utuu hin tanee Mootummaan Nannoo Flemish Magaala Brussels kana keessa ga’ee gudaa qaba, Manen Barumsa Afaan Faransaayii waliin walqixaa barsisisu, Brussels keessatti Afaan Flemishii fi Faransaayii wal qiixee tajaajila keena. Naga’ee hunda irratti afaan lachuun bareefama xalaayan bareefamuu fi seeri ba’uu hundi Afaan lachuun hojeetama. Hojeetan nama keesumeesuu yoo nama tokko ta’ee nama Afaan lachuu qixee beekutu ramadama ykn ammoo nama Afaan Faransaayii dubatu tokko fi Nama Afaan Flemishii beeku tokkotuu ramadama. Finfinnen garuu hanga yoonati mirga Oromoo tokko ilee kabajee hin beektu, akka mirgi Oromoo kabajamuu qamii falmatee ilee hin jiru,kun bakka tokko irratti dhabate siirachuu qaba.
Maqa Maaster Pilaaniin Dula Oromummaa baleesuu Wayyanen labsite kana Oromoon akka qoosati ilaalee caliisuu hin qabu, Median Oromoo calisuu hin qaban, beekan Oromoo fi ummani Oromoo maruu gadii ba’ee mormachuu qaba. Keesumatti Uummatii lafa isaa irra buqa'aa jiruu kun of irratti caalisuu hin qabuu, Yeeroo Uummani Ambo, Naqamte fi Gimbi, Roobee fi Deredawa falmatuu Magaaloon nannoo Finfinne calisan cisuu hin qaban. Mormii Maaster Pilaani Finfinnee Dursani mormuu kan egalan Gootoon Baratoota yunivarsitii Jimma yaamuu ta'uu utuu hin turiin Ambo, Wallaga, Maddawalabuu, Diredawa, Haromaya, Adama , Finfinne, Hawwasa, Bule Hora, Gimbi, Dambidolo fi Dila university kkf Mormii isaan fininnsan. Keesummati Uumani Ambo fi Gimbi baratoota cinna hirirun deggersa isaan yeeroo argisisan, Burayuu, Sabata, Dukam, Alamgana, Dagam, Sandafa kkf sochin isaan xiiqa ture. Lubun Baratoota badee kanatti namni gaafatamee hin jiru. Baratooni kun maliif lubu isaan wareegan Maaster Pilaani kun Oromiyaa jalatti ta’uu qaba, waan uummani keenya didee fi jibe hojii irra oluu hin qabuu jeedhan OPDOn akka dhaabati Miseensoon OPDO amoo akka namati falmachuu dadhabun isaan nama gadisisa. Mormii Master Plani lubu 100 ol itti wareegamee Baratoon Oromoo heedun qama itti hirtan, baratoon heedun barumsa isaan irra baqatani utuu kara adeeman Galana Medetraniya fi India keessatti dhuman kan Lbiya keessatti qalaman, kan Hargesaa keessatti ajjeefaman, 5000 ol amoo mana hidhatii dararama utuu jiran rakkoo kanafi furmata barbaduu irra Karoora TPLF kana hojii irra olchuuf yaaluun Ethiopia diiguu fida.
Uummani Giduu galeessa Oromoo (Shawwa) Goota akka J/Tadassa Biruu, K/Hailu Ragassa,K/Alemu Qixeesa, A/D/ Mamoo Mazamir, Agarii Tulu faa kkf keessa madee haraa yeeroo laf isaa samamuu ol deebi’ee ciisuu hin qabuu, yoo meesha dhabee diina mana isaa dhufee isaa buqisee mana irratti ijaratuu abidan gubee of irra ari'achuu qaba. OPDO keessa warii jiran ilmaan Oromoo ilee Nafxanyoota of keessa rukutuun karoora Nafxanyoota kana dura dhabachuu qabuu. Planni Magaaloota Nannoo Oromiyaa kan qoopha’uu qabu Oggesoota Oromoon malee Oggeesoota Nyafxanyaoota fi Oggeesoota Faransaayii wara addaa fi seena Oromoo hin beeknen qoopha’uu hin qabu, kun iyuu Saba Oromoo tufachuu waan ta’eef jijjiramuu qaba. Oggesoon Oromoo Master Planii Magaala Nannoo Oromiyaa qoophesuuf qoophidha.
Gootumman kan yunivarsitii irra baratamu miti, gootumman baayina qabeenya meesha miti, Gootumman Falmatani harka qulaa lolani diina irra fudhatani of hidhachisaani diina mo'achuudha. Abdissa Aga biyya Hormatii Titoo waliin yeeroo mana hidhaatii baduu harka isaa qula ture, inuu biyya horma keessatti gootumadhan diina isaa moo’ate. Laga ofi keessatti Oromoo million 50 falmachuu fi ofi irrati lolachuu waan dadhabuu miti. Mana diina, Tankin diina, Konkolatan diina Ganda keenya keessa jiru, Abida tokkon barbada'uu ni danda'aa Oromoo ciisee sababa dhiyeesuu irra gadii ba’ee qee’e fi ijoolee isaa irrati falmachuu qaba.
Uummani Oromoo hundi Baratoota Oromoo cinaa hiriruu qaba malee baratooti yeeroo falmatan du’aan dhabatani irrati ilaaluu hin qaban, barsisoon fi Ogannooni yunivarsitii baratoota gargaruu, golga ta’uu malee akka Dr. Mitiku Tessoo Piresdaantii yunivarsitii Ambo Waraana baratootatti wamani ajjeesisun Akkakayuu Torban itiigaaftamu dhufa. Dr. Mitiku Tessoo Akkakayuu torban lubu Bartoota yunivarsitii Amboti ni gaafatama.
OPDOn Magaalan Finfinne isaa akka turte ni beekuu Magaalan Finfinnee humnan babaliseMagaala Akaki Kaliti Qabeenya Motuummaa Nannoo Oromiyaa dabalatee humnan yeero fudhatan ijan arga ture. Kana namni haaluu hin jiru, Yeeroo xurii fi dhiqan Finfinnee keessa ya’uu bishan laga Akaki Mancasuu fi Ijoole sawwa Tisitu Kondomi Bishan waliin dhugede lubun ishee darbuu ijan argine seenaf galmesinee jira. Miseensoon OPDO million 4 kana mormuu sodachun isaan heedu nama gadisisa.
Ta’uus OPDO keessa ilee kan dhugaf falmatan ijarachun isaan bekamadha.
The city is divided into 10 boroughs named subcities and district 99
Kutalee 10 kana keessa wayyanen erga galte Akaky Kaliti -Lafto Keranio humnan Oromiyaa irra fudhataman. Map Finfinnee inni dhugan seera qabsii Kara Finfinnee Marsuu (Qubela Finfinnee) ilee hunda hin hamatuu ture. Wayyanen erga OPDOn qama isheef ajjajamtu ijaratee booda waan barbadee murtesuu egalte. Amma immoo kana irra dabarte km 1,100, 000 humnan fudhachuuf dadhachun ishee egere namoota Tigire nannoo Finfinnee keessa jiratan balaa irra busuun ala bu’aa hin qabu, Oromoon lafa isaa deefachuun hin oluu, Walloon, Rayya fi Qooboon Rayyaa Fi Asebon Oromiyaati deebi’uun waan oluu miti, kanaafuu Wayyanen hara Finfinnee Oromiyaa irra murte sababa kana dhiigaa dhangalasuun egeree ilman Tigirayf gadhee ta’aa. Harafi Oromoo dhiigi isaa yoo dhangala’ee ilee abba Mirga ta’uun isaa waan hin oleef Tigroon yakka hojjeetan hunda irra deebi’an ilaluu qabuu. OPDOn ilee soda of irra busan haqa jiru TPLFti himuu qabuu. Yakki dalagama jiru kun duguga sanyii Baleesun TPLF qoofa utuu hin tanee Oggannoota OPDO kana keessatti hirmatan ilee guyyaa tokko ittigaafachisuuf deema. Lubu badee fi amma ilee jeequmsa ka’uu irratti lubu baduuf Mootumman TPLF duguga sanyii ballesuu Oromoonti ni gaafatamuu.
Oromiyaan Ni Bilisoomtii